inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana - Gary Bailey
Tag: inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana
Umshuwalense Wendlu Yesikhashana Gauteng
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, Umshuwalense Wendlu Yesikhashana ku Gauteng kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, Izingcaphuno Zomshuwalense Ekhaya umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, Isitatimende Somshuwalense Wendlu kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.
Umshuwalense Wendlu Yesikhashana ku Gauteng ?
Imishanguzo yomshuwalense ibalwa ngokwezinto eziningana zobungozi. Lezi yizici ezikhonjiswe yinkampani yomshuwalense njengoba cishe kunomthelela kulabo abathintekayo ababhekele ingozi. Umshuwalense uyindleko ebalulekile ehlotshaniswa nento eqinisekisiwe futhi akufanele igijimele. Kuhlale kungumqondo omuhle ukuthenga nxazonke ukuze uthole intengo engcono kakhulu. Imishanguzo yomshuwalense izohluka kakhulu kusuka kumshuwalense kuya kumshuwalense ukwenza umsebenzi wesikole sakho.
Bheka izinkampanini ezahlukene zomshuwalense oyithandayo futhi uzibuze for quote. Bangakwazi ukukunikeza ukulinganisa okubi kakhulu futhi izingcaphuno eziqondile nakakhulu kufanele futhi zenzeke uma unikeza imininingwane eyengeziwe futhi ulinde. Kufanele futhi ubheke ama-insurers ku-intanethi futhi uthole izingcaphuno ezisheshayo kusuka kuwebhusayithi yazo. Lena indlela esheshayo futhi ephumelelayo yokuthenga ezungeze. Uzothola umbono omuhle walokho amanani okufanele alindele. Ungase futhi uhlole amawebhusayithi wekhothethi ukuze ubone ukuthi yithinta kanjani inani lakho lentengo uma ukhetha izinketho ezahlukene. Ngayo yonke imigomo yomshuwalense uzoba nenani lezinketho ezithinta intengo yenqubomgomo.
Ngakho-ke kufanele ucabange ngalokhu okukhethwa kukho futhi uma kukhona izingozi ongafisi ukumboza bese uvumela umshuwalense azi njengoba i-premium yakho kufanele ishibhile.
Kufanele uzame futhi ukuqinisekisa ukuthi awuqinisekisi kabili. Kuyisimiso somshuwalense ongeke uzuze kulokho okwenzeka kumcimbi we-insured. Ngakho awukwazi ukukhokhelwa kabili ngisho noma unezinqubomgomo zomshwalense ezimbili. Ngakho-ke uma ngabe ingozi isivele ihlanganiswe inqubomgomo eyodwa, iphinda uvumele umshwalense wakho azi ukuthi angasusa ekubalweni kwawo.
Imali yomshuwalense wezimoto ngokuvamile kuxhomeke ezintweni ezifana nokuthi yiluhlobo luni lwemoto oshayela ngayo, ingakanani ubudala, ukuthi injini inkulu kangakanani, yenzani futhi imodeli? Uhlobo luni lomshuwalense oludinga futhi ludlala indima, udinga kuphela umthwalo wemfanelo, noma ophelele? Ngabe uzosebenzisa kanjani imoto, isibonelo uzobe uhamba uye emsebenzini nokuthi uhlela amamitha amangaki ukushayela?
Umlando wakho wokushayela uzoba isici esiqinile ekunqumeni ingozi yakho , futhi okuxhunyaniswe nalokhu kuyoba yinkathi yomshayeli, kanti abashayeli abasha bebesengozini yokubandakanya engozini. Uma usemusha, ubulili bakho buzoba yingozi ebalulekile, kodwa uma ubulili obudala ngokuvamile buba bubi kakhulu.
Car Insurance With SR22 noma FR44 Ngemuva kwe-DWI noma i-DUI Yokuthola Ilayisensi
Ukukhokha Umshwalense Wokuzivocavoca Pump:
Ngiye ngizibuze njalo ukuthi izinkampani zomshuwalense zenza kanjani imali eningi nakuba zikhokha izigidi ezinkampanini. Kungenzeka yini ukuthi amaphrimiyamu akhokhayo angaphezu kwakho okudingeka akhokhe? Ingabe uke uzizwe sengathi uvele ukhokhela kakhulu umshwalense wakho we-Auto?
Umshuwalense wakho wemoto uhlukaniswe ngezigaba ezintathu ezinkulu. Ukufakwa kwesibambiso, okwesibili ukugoqa kwakho kokubambisana futhi okwesithathu yi-Comprehensive yakho eyaziwa ngokuthi i-Fire and Theft.
Ake ngichaze izikhalazo kuwe bese unquma uma ukhokha kakhulu umshwalense wakho. Ukuhlinzekwa kwakho okuyimfanelo okudingekayo ngomthetho ukhokhela abanye abantu kwenye imoto noma izimoto uma ungena engozini futhi uthola ukuthi unecala. Ukukhishwa kokubambisana kuzokukhokhela umonakalo owenziwe emotweni yakho noma ngabe uyaphutha noma cha.
Empeleni uthi kuNkampani Yomshuwalense, "Mnu. Insurance Company Ngizokukhokhela njalo ngenyanga ukulungisa imoto yami uma kwenzeka yonakaliswa ngisho noma nginephutha ". Bobabili uzovumelana ngemigomo bese usayina inkontileka.
Ukufakwa okuphelele (Umlilo noBugebengu) kuzokwenzela imoto yakho nganoma yini enye ngaphandle kokushayisana okunjengokuthi eyebiwe, ibanjwe umlilo, yonakalisiwe njll Kunamanye ukuhlanganisa phakathi kwalabo abakhokhela izinkokhelo zezokwelapha, ukulahleka kwemali engenayo njll.
Okwamanje sizoxoxa nje ngalezi zincwadi ezibekwe eceleni ngokubanzi futhi sibheke ukuthi zingakanani izinkampani ze-inshuwalense zihlala zifakwa ngokomthetho ukuze ukukhokha izimangalo zayo.
Thatha kimi ungathandi ukushayela ngaphandle komshuwalense futhi ufuna ukuqinisekisa ukuthi abanye abashayeli nabo baqinisekisiwe, ngani? Ngoba uma ushaywa ngenye imoto futhi uhlupheka nganoma yiluphi uhlobo lokulimala komzimba futhi kufanele ube esibhedlela noma ulahlekelwe yimali engenakho ukusebenza, ufuna ukuthula kwengqondo ukwazi ukuthi kukhona imali evela endaweni ethile ukukhokha yakho izikweletu kanye nezindleko zakho zansuku zonke.
Masibhekane nakho, lokhu akuzona njalo kuyoba njalo ngenxa yokuthi uhlelo lwomshuwalense lubekwe kanjani, ngilandele lapha manje. Ngomthetho kumele uthwale Umshuwalense Wezimpahla Emotweni yakho ukuze ube emgwaqweni ngokomthetho. Khumbula lokhu okuyikho okuzokhokhwa ukushaya enye imoto.
Nasi iqiniso lokuthi, ungakwazi ukushayela enye imoto uma imoto yakho ishukuthela futhi ngaphandle kokuthi iqhutshwe iyohamba kuphela uma iqhutshwa. Wena nami sisazi ukuthi ngeke sikwazi ukushayela le moto ngaphandle uma kuphethiloli ku-tank.
Ngakho uma ubeka imoto yakho egaraji lakho, vula umnyango bese uhamba ngeviki ezimbili noma isikhathi eside ulindelwe i-cruise inyanga, kungani kufanele ukhokhele umshuwalense wemfanelo lapho imoto ingaqhutshwa? Ingabe kukhona okungahambi kahle ngalokho? Kodwa ukususa ukubuyiswa nokubuyiselwa kwakho lapho ubuya eholidini ukhokhiswa inhlawulo yokungabi nesikhwama somshwalense. Ungase ube nelayisensi yakho imisiwe.
Asho ukuthi uthenge imoto entsha futhi uyixhase ngebhange, ibhange linomnikazi wemoto kuze kube yilapho usukhokhelwe ngokuphelele umbolekisi ngakho-ke bangakwazi futhi bavame ukufakazela ukuthi uthwala ukumbozwa kokuhlangana uma kwenzeka ukulimala engozini noma okubi kakhulu uma kwenzeka kube yingozi kakhulu ukulahlekelwa okuphelele.
Nakuba ngivumelana nalokhu khumbula awukwazi ukushayisana uma imoto yakho ingahambi futhi ingahamba kuphela uma kukhona uphethiloli itanki, uyavuma? Ngakho-ke nansi inkolelo yami, uma ukusetshenziswa kwanoma yikuphi kwalezi zincwadi (Ukuzibophezela nokuHlangana) akunakwenzeka ngaphandle kokunyakaza nokunyakaza kuncike ekutheni uphethiloli akufanele yini ukukhokha kwakho kuboshwe ukuze uphethile? Iyiphi indlela engcono yokwenza lokhu kunokufaka icala lokukhokhiswa ngentengo epompo. Ngokukwenza kanjalo ukuxazulula le nkinga futhi kungenzeka ukuba nabashayeli abangaqinisekisiwe emgwaqweni.
Uma uphethiloli wakho uphuma bese imoto yakho iyoyeka futhi awukwazi ukushaya noma yini nayo ngoba ayidluli. Hamba kabusha futhi uphinde uqinisekiswe kabusha.
Izinkampani zomshuwalense zivame ukukukhokha ngokusebenzisa imoto yakho, njengokungathi uqhuba imoto yakho ukuthi isebenze noma uyisebenzise ukuze uthole ukuzijabulisa. Ngaphezulu kwakho uhamba ngokukhokha kwakho ngaphezulu komkhawulo othile we-mileage. Isibonelo ukuthi uma ushayela ngaphansi kwamamayela ayishumi ukuze usebenze ukhokhela kancane kunalokho uma ushayela ngamamayela angaphezu kuka-10. Ngakho-ke inkampani yomshuwalense ithi ukuthi uma ugcina imoto yakho ishukumisela kakhulu ukuthi uzothola engozini.
Ngakho uhamba ngamamayela angama-50 ngendlela eyodwa yokusebenza, udinga ukushisa uphethiloli kunokuba ushayela amamayela angu-7. Kungani ungafaki i-premium yakho ibe yinkokhelo yakho yamafutha? Kubonakala njengendlela enhle yokukhokhela umshwalense.
Paka imoto yakho phakamisa Umshwalense wakho:
Ubeka ipaka imoto yakho 'yokupaka izimoto ngehora eziyi-8. Uya phezulu ehhovisi lakho bese wenza umsebenzi ogcwele usuku lonke. Lapha imoto yakho ayihambeli amahora angu-8. ngakho-ke ngeke ushaye noma yini noma ubani okwamanje ukhokha inkampani yomshuwalense. Lapho imoto yakho isitolo sokulungisa, izingxenye zise-oda emuva futhi ngezinsuku ezintathu ezizayo uqasha imoto. Uthengela uphethiloli wendawo yokuqasha futhi ungase udingeke futhi uthenge umshuwalense kulowo moto. Lapha manje ukhokha kabili. Uhlu luqhubeka futhi kodwa uma ukhulu njengezinkampani ze-Insurance ungenza imithetho yakho. Noma ingenye yezindlela izindlela zenkampani yakho yomshuwalense engakwenza kahle ezithembisweni zabo kuwe.?
Nokho konke lokhu kwenza ingxabano enhle yokubopha uphethiloli kanye nomshuwalense ndawonye into eyodwa ebaluleke kakhulu elahlekile yi-agent yakho . Lapha lapho uzothola khona ukwelulekwa kobuchwepheshe ukuthi kungcono kanjani ukuvikela izimpahla zakho.
Ngiyathanda elithi "Umshuwalense unjengeparachute". Ungase ukhononde ngokuyikhokhela kodwa ujabule lapho wenza khona noma nini. Thatha iseluleko sami futhi ungalokothi uhambe ngaphandle kweMshwalense.
Gary Bailey Yiba Ikhava Yomshuwalense Wasekhaya Wesikhashana Uhlu
Author garybaileyPosted on March 8, 2019 March 8, 2019 Categories Ikhava Yomshuwalense Wasekhaya Wesikhashana PretoriaTags abahlinzeki bomshuwalense benkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, abahlinzeki bomshuwalense wezempilo wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, amazinga omshwalense wempilo yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, Classic car umshuwalense guide and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, Imibhalo yomshuwalense wasekhaya yaseNingizimu Afrika and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, imihlahlandlela yomshuwalense wemoto yakudala and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, imininingwane yomshuwalense wemoto yakudala and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, inkampani yomshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, Inkampani yomshuwalense yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, inkampani yomshwalense wemoto yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, inkampani yomshwalense wezempilo yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, inkampani yomshwalense yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, inqubomgomo yomshwalense yenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, Isaphulelo somshuwalense ekhaya and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izidingo zomshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izincomo zomshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izindleko zomshuwalense wemoto zakudala and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izindleko zomshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izingcaphuno zemishuwalense ekhaya and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izingcaphuno zomshuwalense ekhaya and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izingcaphuno zomshuwalense zomzimba and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinhlelo zomshuwalense wamazinyo ezinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinhlelo zomshuwalense wezempilo ezinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinhlobo zomshuwalense ezinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinkampani zomshuwalense ezinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinkampani zomshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinkampani zomshuwalense wezempilo and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinsizakalo zomshuwalense ezinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, izinzuzo zomshwalense wemoto zakudala and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, okuyisisekelo somshuwalense wezimoto zakudala and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, thola i-inshuwalense yomndeni and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, uhlu lwezinkampani zakudala zomshuwalense wemoto and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, uhlu lwezinkampani zomshuwalense ezinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, ukufaneleka komshwalense wemoto zakudala and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, ukuqhathaniswa komshuwalense ekhaya and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umphathi womshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, Umshuwalense wemoto engcono kakhulu ochwepheshe abasha and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto izinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto ka-peter d james and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto ochwepheshe and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezokwelapha and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezomthetho and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto webhizinisi and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wemoto yezimoto zebhizinisi and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wenkampani kanye nobungozi and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wezempilo wenkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshuwalense wokuthuthukisa izinkampani and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshwalense wemoto omdala oqinisekisiwe and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, umshwalense wemoto omdala wokulinganisa and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana, Umshwalense wemoto zakudala uchazwe and Umshuwalense Wendlu Yesikhashana
Umshuwalense Wendlu Yesikhashana Sandton
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, Umshuwalense Wendlu Yesikhashana ku Sandton kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, Imoto Yomshwalense Wokuqhathanisa Imoto Inthanethi umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, Umshuwalense Womuntu Siqu kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.
Umshuwalense Wendlu Yesikhashana ku Sandton ?
Qhathanisa umshwalense wemoto ngenzuzo yakho siqu
Uma okwamanje uhlala eMissouri noma uhlela ukuthuthela lapho, umshwalense wemoto yinto ozoyihlola ngempela uma uhlela ukuba nomnikazi wemoto. Umshwalense wokuzenzekelayo ubeka wena uma ubangela umonakalo kunoma yimuphi umuntu noma umzimba womuntu, futhi kuyadingeka ukuthi ubhalise futhi ushayela noma imuphi imoto.
Isimo ngasinye sinezimiso nemithetho yaso uma kuziwa ku-auto umshuwalense, ngakho kungaba umqondo omuhle ukuvakashela iwebhusayithi yaseMissouri yeMoto yeMoto ukuze uthole imininingwane ephelele yalokho okudingayo. Ngokujwayelekile, kukhona umshuwalense wemfanelo encane okufanele udonswe kuwo. KuMbuso waseMissouri, lokhu kulandelayo: $ 25,000 ukuhlolwa okuncane kokulimala komzimba ngomuntu ngamunye, ukukhokhelwa okungenani $ 50,000 kwengozi ngayinye, kanye no-$ 10,000 ubuncane bokufaka impahla noma ingozi ngayinye. Kuhle ukwazi lolu lwazi uma uthengisa umshwalense wemoto ukuze ukwazi ukwaziswa kangcono futhi ungathola inqubomgomo enhle kakhulu kuwe.
Inshwalense yemfanelo, okuyinto enikezwe igunya eMissouri, ayifihli umnikazi wezinqubomgomo uma kwenzeka kwenzeka ingozi. Lolu hlobo lwemshwalense luhlanganisa kuphela abashayeli bezinkampani zangaphandle kanye nempahla. Ukuziqinisekisa wena nemoto yakho, kufanele ucabangele ukushayisana nokuhlanganisa okuphelele. Uma ufuna ukuthula kakhudlwana kwengqondo, ungakhetha umshwalense wokushayela ongaqinisekisiwe noma ongagunyaziwe, okukuvikela uma kwenzeka umuntu ehlasela imoto yakho futhi engavunyelwe noma engaqinisekisiwe.
Uma ufuna amanani omshuwalense omoto ongcono kakhulu Missouri, iseluleko esihle kakhulu ukuthenga ezungeze futhi uqhathanise okungenani izinkampani ezinhlanu zomshuwalense. Ungase umangale ukubona ukuthi amazinga omgomo ahluke kangakanani phakathi kwezinkampani ezihlukene, ngisho nezinketho ezifanayo noma ezifanayo zokuqapha. Yingakho kubalulekile ukuthenga nxazonke futhi uqhathanise amanani omshuwalense wemoto amaningi.
Ngisho noma okwamanje uqinisekisiwe, ungase ukwazi ukusindisa amakhulu amadola ngonyaka ngokushintsha abahlinzeki bomshuwalense wezimoto. Ungakwazi ukuqhathanisa izingcaphuno eziningi ku-intanethi ngendaba emaminithi, ngakho-ke awukho lutho oluzolahlekelwa, noma ngabe ungagcina usindisa okuningi.
I-Missouri Insurance Information Service ithi izimoto ezingaphezu kuka-20 000 kubikwa kubiwe ngo-2008, cishe ingxenye yabo eSt. Louis naseKansas City. Lokhu kungaba kuhle ukucabangela lokhu yizindawo ezimbili ezinkulu kunazo zonke ezisemaphandleni, kepha lokhu kuyizindaba ezimbi kubahlali baseSt. Louis naseKansas njengoba lokhu kusho ukuthi cishe bazokhokha izinga eliphezulu le-inshuwalense ngenxa yezinga eliphezulu lobugebengu. Izimoto ezinhlanu ezivame kakhulu ezebiwe eMissouri yi-Dodge Intrepid, i-Ford Taurus, i-Pontiac Grand Prix, i-Dodge Stratus ne-Oldsmobile Cutlass, ngakho-ke ungase ufune ukugwema lezi zimoto ukuze ugcine amazinga omshwalense wakho wemoto ngangokunokwenzeka.